A Wanderer's Notebook: July 2008
အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာ မြန်မာပြည်အတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ ။
ဗိုလ်ချုပ်အပါအ၀င် မြန်မာ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် အာဇာနည်တွေကျဆုံးခဲ့ ရတဲ့နေ့ ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတည်း ကသည်လိုသာမန် သဘောထားမိခဲ့သည် ။ ထိုနေ့တွင် ကျောင်းပိတ် ၊ ရုံးပိတ်တတ်၍ မျှော်ပင်မျှော် နေတတ်ခဲ့သည် ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ပြန်တွေးကြည့်မိတော့ ထိုနေ့လောက်အကျည်းတန်သော နေ့ဟူ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် အတွက်မရှိ ။
ထိုနေ့ဟာ ချောက်အိပ်မက် တစ်ခုဖြစ်တယ် ကဗျာဆရာမ ငွေတာရီက ရေးဖွဲ့ခဲ့သည် ။ သေချာတာ ကတော့ ယခုတိုင်အောင် ကျတော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေ ချောက်အိပ်မက်မှ မနိုးထနိုင်ကြသေးပါ ။ အာဇာနည် နေ့မှာ မှတ်သားထားမိတဲ့ ကဗျာဖွဲ့လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဇူလိုင် (၁၉) ရက်၏ချောက်အိပ်မက်
မဆိုင်းမရပ် ၊ အထပ်ထပ်တည့်
သေနတ်ပစ်သံ ၊ ဆူဆူညံလျက် ။
ရစ်သိုင်းမှုန်မှေ့ ၊ တဝေ့ဝေ့တည့်
ယမ်းငွေ့ မီးခိုးသူကြီးစိုးလျက် ။
သွေးတိနီလွင် ၊ အောက်ကြမ်းပြင်ဝယ်
လျားမှောက်ပက်လက် ၊ ငြိမ်သက်လျက် ။
နှုတ်ဖျားသံထွက် ၊ ရုတ်တရက်တည့်
မျက်စိလှည့်စား ၊ လေသလားဟု
ထင်မှားစိတ်ရွံ့ ၊ မပြောဝံ့သည်
သက်စွန့် ဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ ။
`အိုဘုရား နှင့် နတ်များကယ်ပါ´
ဆိုကာမြည်တမ်း ၊ မောဟိုက်ပန်းနှင့်
စိတ်နွမ်းလှိုက်ဖို ၊ မျက်ရည်ယိုက
မှန်းချင့်မျှော်ကာ ၊ ကြည့်လိုက်ပါသော်
တိမ်လွှာနောက်တွင် ၊ လစန်းရှင်သည်
မရွှင်လှိုက်ဖို မဲညိုလျက် ။ ။
ဆရာဇော်ဂျီကတော့ အာဇာနည်နေ့မှာ ကျဆုံးလေပြီးသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီး ခေတ်သစ်မောင်မယ်တွေ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရစ်ကြပါ။ ပြည်သူ လူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုကြပါလို့ လူငယ်တွေကို အာဇာနည်နေ့မှာ ဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ် ။
မင်း၏သားနှင့် ၊ ပြောချိန်သင့်ပြီ
လွတ်ခွင့်ရနီး ၊ လွတ်စည်တီးမှ
ဖျက်ဆီး ကြံရွယ် ၊ အန္တရာယ်သည်
မဖွယ်မရာ ၊ တို့ပြည်ရွာ၌
ပေါ်လာမကောင်း ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ။
ဖျက်ဆီး ကြံရွယ် ၊ အန္တရာယ်တည့်
နယ်ချဲ့သွေးထိုး ၊ ဒေါသအိုးသည်
တိုင်းကျိုး လိုလို ၊ ဘာလိုလိုနှင့်
ကိုယ်ကျိုးထဲပိုက် ၊ မှောင်ခိုတိုက်သည်
မိုက်ခဲ့မကောင်း ၊ မိုက်ခဲ့ကြောင်း ။
အမိုက်ကမ်းခတ် ၊ သူ့အတက်ကြောင့်
လွတ်မှုကြိုးပမ်း ၊ ခုလတ်လမ်းတွင်
ဆန်းတို့တစ်စု ၊ တိုင်းပြည်ပြုတို့
မရှုမလှ ၊ ကြွေလိုက်ရသည်
ကျခဲ့မကောင်း ၊ ကျခဲ့ကြောင်း ။
မင်းကပြန်ပြောင်း ၊ မင့်သားကောင်းကို
အကြောင်းစုံသိ ၊ မင့်ဝန်ရှိ၏ ။
ရှိပါကတဲ ၊ သူ့စိတ်ထဲ ၌
တိတ်စွဲသောက ၊ စွဲဒေါသတို့
မကြွစေချင် ၊ ပြေစေချင်၏
ပညာအသိ ၊ သတိဖြစ်ရေး
အတွေးမှန်ကန် ၊ နိုင်ငံလူထု
ပြုစေချင်၏ ပြုပါဘိ ။ ။
အာဇာနည်ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အခါကမျှ ပြည်သူတို့၏ စိတ်တွင်သေသွားရိုး ထုံစံမရှိပါ ။ ကျတော်တို့ ဘိုးဘွားတွေ လက်ထက် ၊ အဖေအမေလက်ထက် ၊ ကျတော်တို့လက်ထက် နောက် ကျတော်တို့ နောက်မျိုးဆက်တွေ လက်ထက်ထိတိုင် အာဇာနည်တို့၏ ပုံရိပ်နှင့် ကျတော်တို့ နိုင်ငံသားအားလုံးကို ဒဏ်ခတ်ခဲ့သော နေ့တစ်နေ့ကို မေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ။ သည်လို အခါမှာတော့ နိုင်ငံ့အနာဂတ်အကျိုးကို အာဇာနည်တွေကို စံထားလျက် တတ်လူတို့ရှေ့ရှုသင့်ပေသည် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော် ဇူလိုင် (၁၉) မှ စခဲ့သော မြန်မာပြည်ချောက်အိပ်မက်ကြီး ဆုံးခန်းတိုင် နိုးထနိုင်ပါစေတော့ .
နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးသွားကျပြီးဖြစ်သော အာဇာနည်များအား ဦးညွှတ် အလေးပြုလျက်…….
Posted by Aung Phyoe at 21:52 No comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, စာစု
Posted by Aung Phyoe at 20:326comments: Links to this post